Sharci booliska ka hor istaagaya in ay dadka qasab ku musaafuriyaan oo la ogaaday | Somaliska
Iyadoo dowlada Sweden ay booliska amar ku siisay in ay soo qabtaan oo wadanka xoog uga musaafuriyaan dadka sharciga loo diiday ee lagu amray in ay wadanka ka baxaan, ayaa hadda waxaa soo baxay caqabad hor-taagan booliska oo ka mamnuucaysa in ay dadka musaafuriyaan.
Xeer ililaakiyaha cadaalada ( justitieombudsmannen, JO) ayaa sheegay in aan qof wadanka laga musaafurin karin iyada oo aan la soo xirin oo aan cadaalada la marsiin. Balse tani ayaa guud ahaan mid aan macquul ahayn ka dhigaysa in la musaafuriyo qoysaska caruurta leh maadaama sharcigu uusan ogoleyn in caruurta la xiro.
“Waxay noqonaysaa mid aan guud ahaan macquul ahayn in qoys aan dooneyn in ay ayroboorka tagaan qasab lagu geeyo” ayay tiri Marianne Paulsson oo ka tirsan booliska xuduudaha.
Xeer ilaaliyaha cadaalada ayaa hadda baaritaan ku sameynaya in loo baahanyahay in sharciga wax laga badalo balse taasi ayaa qaadan karto muddo dheer oo ilaa 2 sano.
Dadka qaan gaarka ah ee keligooda nool ma khuseeya sharcigaan ama qoysaska ayuu u gaar yahay sifican uma fahmin heerkan maxaa loona jeedaa yaa sharaxaad dheeri ah nooga bixin kara asxaabta